ISwallows izocophelela ukuthi ithenga umdlali onjani, kusho uTruter - Impempe
ISwallows izocophelela ukuthi ithenga umdlali onjani, kusho uTruter
UBrandon Truter weSwallows FC
Ngumdlali okhethekile kuphela ozosayinwa yiSwallows FC uma isengaphansi kwesandla sikaBrandon Truter kwazise lo mqeqeshi uyacophelela ukuthi akalandi umuntu ozofike abe wuhlupho eqenjini lakhe.
Yize iSwallows isenza kahle futhi kuyiyo neMamelodi Sundowns kuphela abangakahlulwa kwiDStv Premiership, uTruter uthi kukhona la abashoda khona, abadinga ukuqinisa kancane.
Iwindi lokudayiswa nokuthengwa kwabadlali kuleli liyavala ngoMsumbuluko ebusuku. Lokhu kushiya amaqembu namahora ambalwa okusayina noma ukuchitha abadlali.
“Iwindi lizovala emahoreni ambalwa. Sifuna ukucophelela ekutheni siletha bani lapha. Phambili siyashoda, asiwakhi ngendlela amathuba okushaya amagoli, ngakho siyakucabanga ukuthi sithole umdlali ozosisiza kulokho kodwa asikhohliwe nokuthi siyiqembu elisha.
“Kumele sinike abadlali abathile ithuba lokuveza ukuthi yini abangayenza, bakhule neqembu. Sinenqwaba yabadlali abasebancane. Kodwa khona kunjalo, kungenzeka kube khona oyedwa noma ababili esizobasayina.
“Kodwa sizoqinisekisa ukuthi ngumdlali onomoya omuhle nokwazi ukuziphatha esimletha eqenjini,” kuchaza uTruter.
ISwallows idlale ngokulingana isekhaya eDobsonville Stadium ngeSonto emdlalweni weDStv Premiership obuwezelisa ebibhekene kuwo naMaZulu FC. UTruter ukhala ngokuthi bekungamele balahle amaphuzu ekhaya.
“Uma sisekhaya kumele siwine. Yingakho ngingasho nje ukuthi silahle amaphuzu amabili ngoba besisekhaya. Angijabule ngomphumela.
“Kodwa ngokokudlala siyathuthuka kancane futhi ngeke ngibasole abadlali kulokho. Besiwuphethe umdlalo. Kodwa ke ngihlale ngisho ukuthi uma kungawineki, okungcono asidlale ngokulingana.”
ISwallows izobhekana neCape Town City emdlalweni wayo olandelayo weligi ngoLwesithathu ntambama. UTruter uthe bazolwela amaphuzu agcwele kodwa uyazi kuzoba nzima ikakhulukazi njengoba iCity ibuye isuthi induku eGauteng.
Previous Previous post: Sesitholakele isixazululo ngomdlalo weChiefs neWydad yaseMorocco
Next Next post: ‘Kubuhlungu impela kodwa usephumule ezinhlungwini uBra Mzi,’ kusho uNcita